प्रविधिबाटै विशेषज्ञ सेवा – Sajha Bisaunee
प्रविधिबाटै विशेषज्ञ सेवा
कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा सुलभ छैन । एकातिर दरबन्दी अनुसार चिकित्सक छैनन् भने अर्कोतिर स्वास्थ्य पूर्वाधारको अभाव उस्तै छ । भौगोलिक विकटताका कारण चिकित्सकहरूको रोजाइँमा कर्णाली पर्दैन । दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ मात्र होइन स्वास्थ्यकर्मी भेट्नसमेत मुस्किल छ । प्रदेशमा ६६ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रिक्त छ । एक सय ३३ दरबन्दी रहेकोमा हाल २८ जना चिकित्सक मात्र कार्यरत छन् । प्रदेशमा एक जना चिकित्सकले झण्डै आठ हजारलाई सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ । चिकित्सकसँगै नर्स, पारामेडिक्स र महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरूको कर्णालीमा निकै अभाव छ ।
स्वास्थ्य जनशक्ति र पूर्वाधारको समस्या झेल्दै आएको प्रदेशमा पछिल्ला दिनमा भने वैकल्पिक माध्यमबाट चिकित्सकीय सेवा दिन थालिएको छ । जनशक्ति अभावमा स्वास्थ्य सेवा लिनबाट वञ्चित नागरिकहरूलाई लक्षित गरी टेलिमेडिसिन सेवा दिन थालिएको हो । दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा आउने बिरामीले केही समययता भर्चूअल माध्मबाट विशेषज्ञ सेवा पाउन थालेका हुन् । दूरीका हिसाबले चिकित्सक टाढा भए पनि उनीहरूले इन्टरनेट र टेलिफोनको माध्यमबाट दुर्गमका बिरामीलाई सेवा दिइरहेका छन् । टेलिमेडिसिन सुरू भएपछि बिरामीलाई सहज भएको र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमासमेत वृद्धि हुँदै गएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।
स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन तथा बिरामीको सहजताका लागि थालिएको अभियान टेलिमेडिसिन सेवा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । प्रविधिको प्रयोगबाट सबै नागरिकले स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने अवस्था भने अझै पनि छैन । चिकित्सक अभावमा विशेषज्ञ सेवा लिनबाट वञ्चित केही नागरिकलाई भए पनि राहत मिलेको बताइएको छ ।
सरकारले दुर्गममा रहेका सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी प्रदेश अस्पतालकै जसरी विशेषज्ञ सेवा दिने उद्देश्यले टेलिमेडिसिन सुरू गरेको थियो । गएको वैशाख १५ गतेदेखि सेवाको थालनी भएको हो । अहिले यो सेवा दिन कर्णाली प्रदेश अस्पतालसँग ६ जिल्लाका दश वटा स्थानीय तह जोडिएका छन् ।
प्रदेश अस्पतालका अनुसार मुगुको मुगुमकार्मारोङ र खत्याड गाउँपालिका, जाजरकोटको जुनीचाँदे र बारेकोट गाउँपालिका, हुुम्लाको सर्केगाड, अदानचुुली र चंखेली गाउँपालिका तथा सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकामा टेलिमेडिसिन सेवा उपलब्ध छ ।
यस्तै केही दिन पहिले मात्र दैलेखको महाबु गाउँपालिका र डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकामा पनि सेवा विस्तार गरिएको छ । अहिले प्रदेशभर १० वटा स्थानीय तहका ४० वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा सञ्चालन गरिएको छ । यीमध्ये एक जिल्ला अस्पताल हो भने अरू प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाहरू हुन् ।
टेलिमेडिसिन सेवाको प्रभावकारिता दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको प्रदेश अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसीले बताए । उनले अहिले सुरुवाती चरणमा केही संस्थाहरू मात्र समेटिए पनि विस्तारै प्रदेशका सबै ठाउँबाट सेवा पुग्ने जनाए । ‘विकट ठाउँमा विशेषज्ञ चिकित्सक अभावमा नागरिकले सेवा नपाउने समस्या छ । यो प्रविधिले नागरिकले आफू बसेकै ठाउँबाट सेवा लिन सक्छन्,’ उनले भने । डा. केसी अबको मेडिसिनको भविष्य भनेकै टेलिमेडिसिन सेवा भएको बताउँछन् । स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिले घरमै बसेर डाक्टरहरूबाट परामर्श लिन सकिने भएकाले यो सेवा कर्णालीका लागि बढी प्रभावकारी बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।
दैलेखको महावु गाउँपालिकामा रहेको अस्पतालमा डाक्टरका लागि विज्ञापन गर्दा पनि नगएपछि अहिले टेलिमेडिसिन जडान गरिएको छ । टेलिमेडिसिन प्रदेश सरकारको ड्रिम प्रोजेक्ट भएकाले पनि यसलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइनुपर्ने डा. केसीले बताए । गएको आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले उक्त सेवाका लागि २० लाख बजेट छुट्याएको थियो ।
यसरी दिइन्छ सेवा
टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालनका लागि प्रदेश अस्पतालमा अपरेटर कक्ष बनाइएको छ । त्यहाँ टेलिमेडिसिन अपरेटरको व्यवस्था गरिएको छ । कर्णाली कियर सफ्टवेयरको माध्यमबाट टेलिमेडिसिन सेवा दिइन्छ । दुर्गम ठाउँका स्वास्थ्य संस्थामा ओपीडी सेवाका लागि आएका बिरामीहरूको त्यहाँ उपचार हुुन नसकेको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको हिस्ट्री लेखेर पठाउँछन् । सोहीको आधारमा अपरेटरले सम्बन्धित विशेषज्ञ चिकित्सकलाई जानकारी गराउँछन् र चिकित्सक र बिरामी तथा स्वास्थ्यकर्मीसँग प्रत्यक्ष भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत जोड्ने काम गरिन्छ । इन्टरनेटको पहुँचमा नभएको ठाउँमा टेलिफोनबाट पनि परामर्श दिने गरिएको टेलिमेडिसिन अपरेटर नरेन्द्र चन्दले जानकारी दिए । उनका अनुसार टेलिमेडिसिन सेवाबाट हालसम्म सैयौं बिरामीले सेवा लिइ सकेका छन् ।
प्रकाशित मितिः २८ माघ २०७७, बुधबार ०९:४६